Raspberry Pi yatove inotsigira DRM zvemukati, asi yakangotyoka Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | Sisitimu Yekutonga, Noticias
Nguva yakareba, tamba zvakachengetedzwa zvemukati paRaspberry Pi chaive chero chinhu asi chiri nyore. Ndakaiwana ndikachigovana munzira mbiri dzakasiyana, imwe yawaifanira kurodha pasi iyo Chrome OS software uye mumwe kuburikidza nemudziyo izvo, zvakanaka, isu tinongoti zvinoshanda (ba). Hapana nzira yaive yepamutemo kana yaive padyo nekuve pamutemo, sezvazviri ikozvino (Updated: haisi yepamutemo, asi kuyedza, asi inotakurwa nechikwata chepamutemo). Dambudziko nderekuti nguva pfupi yadarika yanga isiri kufamba zvakanaka.
Uye ndeyekuti Raspberry Pi OS iri bland system iyo ini zvishoma yandisingade zvakanyanya seManjaro ARM, asi ndiyo yepamutemo. Mushure mechinguva ndakadzokera kunotsvaga ruzivo nezve izvo zvemukati zve DRM pane yakakurumbira rasipibheri ndiro uye Ndawana nhau kuti yave ichiwanikwa kwenguva yakareba. Uye akanakisa, mune epamutemo marekodhi eiyo inoshanda system. Asi chakashata ndechekuti, pakati pezuro nanhasi, vashandisi vatanga kuona glitches.
1 Ridza DRM zvemukati paRaspberry Pi OS… pavanogadzirisa
2 Kumirira chigamba
Ridza DRM zvemukati paRaspberry Pi OS… pavanogadzirisa
Pakutanga, chinyorwa ichi chaizove nezve zvese kuva zvine mutsindo uye kufara, kuti isu taigona kutotamba Netflix, Spotify kana Amazon Prime Vhidhiyo pane Raspberry Pi, asi kuzviedza pachangu ndakaona, kutanga, kuti hazvishande, uye chechipiri , iri munguva pfupi yapfuura, maawa mune zvimwe zviitiko. Inochinja izvo Google yakangovandudza Widevine uye asiya pasuru "yakaturika" iyo inoshanda bhodhi. Asi sarudzo iripo, uye zvinotarisirwa kuti mumazuva zvese zvese zvichadzokera pane zvakajairwa. Naizvozvo, ini ndinosiya iwo mirairo kuti ikwanise kutsigira ramangwana ratinovimba kuti ipfupi.
Chekutanga pane zvese, zvinonzi yakakodzera kuita mune yakachena kuisa, zvirinani kana isu tanga tichitopokana nesarudzo dzakashanda kare. Iyo package, libwidevinecdm0, inowanikwa kubva kumahofisi epamutemo, uye nepfungwa inofanirwa kushanda pane shanduro dzekare dzebhodhi rakareruka, asi mashandiro acho haasi akanakisa kupfuura ese kana ukasashandisa imwe yeiyo nyowani.
Nekudaro, kuzadzisa kuenderana muChromium, bhurawuza iyo yakaiswa nekumisikidza mune yepamutemo inoshanda sisitimu, iri nyore sekudzoreredza zvinyorwa, iyo inoshanda sisitimu uye nekuisa iyo package pamwe nemirairo iyi mitatu:
Sezvo ino nguva isu tisina kuita chero chinhu chinoshamisa, chinhu chete chinosara mushure mekumiswa kwepakeji iri tangazve browser, zvinoita zvakapusa sekutarisa bhokisi kugonesa DRM rutsigiro muFirefox.
Kwandiri, zvishoma kudarika Uye kuwana zvinhu zvishoma zvandaida kushanda kwachinja zvese, uye ndinokuudza nekutendeka kwakazara kuti ndadzokera kune yepamutemo Pi system. Ngatiyambukei minwe yedu uye tinovimba vagadzirise iyo Widevine tsigiro munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kana iwe usina kunzwa (sezvandakaita), iyo Raspberry Pi yatove inotsigira zviri pamutemo DRM zvemukati ... uye yakangotyoka
Vamwe vanoenda kuburikidza neingi uye vanoisa dhijitari.
Nitrux 1.6.0 inouya neyayo yega chitoro, inogadziridza uye nezvimwe